UMHOLI WE-BRAND WESIKHUNGO SE-SQUARE ECHINA
UMHOLI WEZIMBONI ZESIKHUNGO SECHINA
IZINHLELO ZOKUHLE KOMPHAKATHI
ISIKHUNGO NESITOLO SENSIMBI ESIPHENDULAYO
Ipayipi elenziwe ngogesi le-ERW
IPHEPHA LESIMISO ESIKHETHEKILE
Insimbi engagqwali TUBE / Ikhoyili
I-RAW MATERIAL GUARANTEE
Isiqinisekiso sempahla eluhlaza
100% ukuhambisana namazinga
Impendulo esheshayo emaminithini angama-30
YAKHA IBANDLA LOMHLABA WONKE LAMAKHAYA
I-Tianjin Yuantai Derun Pipe Manufacturing Group Co., Ltd., esungulwe ngoMashi 2002 futhi isuselwa kuTianjin Yuantai Industrial and Trading Co., Ltd, itholakala esikhungweni esikhulu sokukhiqiza amapayipi-indawo yezimboni eDaqiuzhuang eJinghai Tianjin eseduze iChina National Highway 104 no-205 futhi iqhele ngamakhilomitha angama-40 kuphela ukusuka eTianjin Xingang Port. Indawo enhle kakhulu yezwe isekela ukusebenziseka kalula kokuhamba ngaphakathi nangaphandle kwezwe.
I-YuanTaiDeRun yakhiwa ngo-2002
Abakhiqizi abaphezulu abangama-500 baseChina
5 million amathani
Umthamo wayo wokukhiqiza ungaphezu kwamathani ayizigidi ezi-5
Iqembu lethu likhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zepayipi lensimbi, anhlobonhlobo wezicelo, ukuqinisekiswa kwekhwalithi, ikhwalithi kuqala
Umhlinzeki weshubhu wensimbi eyisikwele ongu-2 intshi
Osayizi Bamashubhu Esikwele Esimnyama
I-ASTM A36 ithubhu eligoqiwe elishisayo lesikwele lensimbi
Ubukhulu be-MS-Square-Pipe-Thickness – 3-6mm
Isigaba Esingenalutho se-ERW esivela eChina
Izingxenye eziyize ze-YuantaiDerun Structural
I-Iron MS Round Ipayipi Elingenalutho
Iminyaka engama-20 yesipiliyoni sokwenza ipayipi lensimbi
Omunye wababhali bezinga likazwelonke
Amabhizinisi wokukhiqiza amashubhu amakhulu kunawo wonke angunxande
Ngaphezu kwendlunkulu eTianjin, kunezinsizakalo eziningi kanye namagatsha eTangshan nakwezinye izindawo.
YUANTAIDERUN TANGSHAN Fektri
YUANTAIDERUN NO.4 IFEKITI
YUANTAIDERUN NO.3 IFEKITI
IZIMBONI ZEYUANTAI NEZOHWEBO
UKWAKHIWA KWENHLOKO YEQEMBU LE-YUANTAI DERUN
IHong Kong-Zhuhai-Macao Bridge
IHong Kong Zhuhai Macao Bridge iphrojekthi yebhuloho nomhubhe oxhuma iHong Kong, iZhuhai neMacao eChina. Itholakala endaweni yolwandle iLingdingyang ePearl River Estuary esifundazweni saseGuangdong. Kuyisigaba sendandatho eseningizimu yomgwaqo ohamba phambili wendandatho esifundeni sasePearl River Delta.
Inkundla Yezinyoni yeNest
INational Stadium (Isidleke Sezinyoni) itholakala eningizimu yendawo emaphakathi neBeijing Olympic Park. Yinkundla eyinhloko yemidlalo yama-Olimpiki yaseBeijing ngo-2008. Ihlanganisa indawo engamahektha angama-20.4 futhi ingamukela izibukeli ezingama-91000. Ngemuva kweMidlalo Yama-Olimpiki, isibe yisakhiwo sezemidlalo esiyingqophamlando namagugu ama-Olimpiki eBeijing.
Isikhungo Sokubhukuda Sikazwelonke, esaziwa nangokuthi "i-Water Cube" ne "ice cube", siseBeijing Olympic Park. I-natatorium enkulu eyakhiwe iBeijing Yemidlalo Yama-Olimpiki Yasehlobo ka-2008 futhi yenye yezakhiwo eziyingqophamlando zemidlalo yama-Olimpiki yase-Beijing ka-2008
Isikhumulo sezindiza i-HK
Isikhumulo sezindiza saseHong Kong, esiseChek Lap Kok, eLantau Island, eHong Kong, eChina, esingamakhilomitha angama-34 ukusuka endaweni yasemadolobheni, siyisikhumulo sezindiza samazwe omhlaba esingu-4f. Ingesinye sezikhumulo zezindiza esimatasa kakhulu emhlabeni. Izinkampani zezindiza ezingaphezu kwekhulu zisebenza lapha, zibekwa endaweni yesihlanu kumthamo wabagibeli babagibeli futhi okokuqala ngevolumu yezimpahla iminyaka eyi-18 ilandelana
INational Grand Theatre yaseChina ingenye yezinto ezintsha eziyishumi nesithupha "zaseBeijing". Itholakala entshonalanga yeTiananmen Square nasentshonalanga neGreat Hall yabantu abasenkabeni yeBeijing. Iqukethe isakhiwo esikhulu, umgudu ongaphansi kwamanzi, indawo yokupaka engaphansi komhlaba, ichibi lokufakelwa kanye nendawo eluhlaza ohlangothini olusenyakatho naseningizimu.
I-DUBAI EXPO 2020
Eyakhelwe ngaphezu kwamamitha-skwele ayizigidi eziyi-11 omhlaba osezingeni eliphakeme, i-villa yase-Dubai inezinhlobonhlobo zezindawo zokubukeka nezingadi, izindlela zomgwaqo ezinamagagasi nezindawo zomphakathi eziningi. Ukuvuselelwa enhliziyweni yedolobha, amabhulokhi e-Dubai hills estate aklanywe ngobuciko ukuzungeza inkundla yegalofu engu-18 hole
ISIkhumulo sezindiza sase-KUWAIT
I-Kuwait International Airport iyisikhumulo sezindiza esiseFarwaniya, Kuwait, 15.5 km (9.6 miles) eningizimu yeKuwait City, ehlanganisa indawo engama-37.7 square kilometres (14.6 miles miles). Kuyisikhungo sezindiza ze-Al Jazeera nezaseKwait.
Umbhoshongo waseBeijing CITIC, owaziwa nangokuthi uZhongguo Zun, uyisakhiwo sendlunkulu yeChina CITIC Group. Itholakala ku-block z15, indawo esemqoka yesifunda samabhizinisi emaphakathi. Ngokuphakama okuphelele kwamamitha ayi-528, phansi okungu-108 ngenhla komhlaba kanye namaphansi ayi-7 ngaphansi komhlaba, kungabamba abantu abangu-12000 ukuthi basebenze, nendawo ephelele yokwakha engama-437000 square metres. Ukubukeka kwezakhiwo kuklanyelwe ukulingisa isitsha senkambiso yasendulo "iZun". Ngaphakathi kunelifti yokuqala yokugibela emhlabeni enebanga elingaphezu kwamamitha angama-500, elibalwa njengezakhiwo eziyishumi eziphambili zaseChina zanamuhla.
ISINGAPORE UKWAKHIWA KWE-GOOGLE
Lesi kuzoba isikhungo sedatha sesithathu senkampani yezobuchwepheshe eSingapore futhi sizotholakala eJurong West ezansi nomgwaqo ovela kwezinye izakhiwo ezimbili.
I-Dubai Hills Estate ingenye yentuthuko emisha yase-Dubai emangalisa kakhulu. Itholakala phakathi kwemigwaqo emibili emikhulu ka-Al Khail Road kanye no-Mohammed Bin Zayed Road, i-Dubai Hills Estate iyindawo ebanzi yokuhlala kanye nendlela yokuphila ehlanganisa ama-villas, amafulethi aphansi kanye nezindlu zasemadolobheni. Yisigaba sokuqala kuphrojekthi enkulukazi yase-Mohammed Bin Rashid City, esizuze ngokufanelekile umqaphi 'wedolobha ngaphakathi kwedolobha' ngenxa yobubanzi bentuthuko.
I-EGYPT CAIRO CBD
Inhloko-dolobha entsha yokuphatha yase-Egypt itholakala ku-45km empumalanga yeCairo endleleni eya echwebeni lase-Suez City. Lo msebenzi kufanele unikeze izinkulungwane zemisebenzi futhi ukhuthaze umnotho. Uma sekuqediwe inhlokodolobha entsha kulindeleke ukuthi ikwazi ukuhlalisa abantu abayizigidi ezi-5 abaxazulula inkinga yokuminyana okungapheli enhlokodolobha yamanje iCairo. Ngezansi umugqa wesikhathi wephrojekthi yenhloko-dolobha entsha yase-Egypt nakho konke odinga ukukwazi mayelana nephrojekthi kusukela ekuqaleni kuze kube yidethi yamanje.
Umklamo omkhulu wezindlu ezigcina ukushisa owenziwe nguhulumeni waseGibhithe wenza igxathu elibalulekile emlandweni wezolimo kuleliya lizwe njengoba uzodlala indima enkulu ekuzuzeni ukutholakala kokudla ezweni lama-Arab elinabantu abaningi, kusho ochwepheshe baseGibhithe.
Ngobuchwepheshe obuqinile, isikhungo socwaningo nentuthuko
Izinsuku ezingama-90 Isiqinisekiso Sekhwalithi ngemuva kokufika kwezimpahla
Iminyaka engu-20 yesipiliyoni ekukhiqizeni amapayipi ensimbi amakhulu
Sizokutholela isilinganiso samahhala esisheshayo futhi sihlelele umsebenzi wakho ngosuku nesikhathi esikusebenzela kangcono.
Bhalisela i-newsletter yethu ukuze uhlale usesikhathini namaphromoshini wethu, izaphulelo, ukuthengisa, nokunikezwa okukhethekile.
Mayelana nathi Izindaba Xhumana ne- Imibuzo evame ukubuzwa sephrojekthi Asiri Akiyesi